SAWIRRO: Turkiga oo 8 milyan ugu deeqay DF iyo RW Kheyre oo si kal iyo laab ah.. – Warfaafiye:
SAWIRRO: Turkiga oo 8 milyan ugu deeqay DF iyo RW Kheyre oo si kal iyo laab ah..
Ali Mohyadin Apr 21, 2017 0
Qoraal kasoo baxay safaaradda Turkiga ee Muqdisho ayaa lagu shaaciyay in dowladda Turkiga ay ugu deeqday dowladda cusub ee Soomaaliya lacag dhan 8-milyan oo dollar, taasoo qeyb ka ah taageerada ay Turkiga mar walba siiso Somalia.
Lacagtaan ayaa ah mid lagu kabayo miisaaniyadda dowladda ee shan bilood. Safiirka Turkiga u fadhiya Somalia, Olgan Bekir iyo wasiiru dowlaha maaliyadda xukuumadda Somalia Maxamuud Xayir Ibraahim oo kulan ku dhex maray xarunta safaarada ayaa wasiiru dowlaha uu saxiixay lacagta miisaaniyadda ee lagu wareejiyay dowladda federaalka.
Lacagtan ayaa lagu shubay Bankiga Dhexe ee Somalia, iyadoo la waafajinayo maamulka iyo maareynta aaliyadda dalka sida uu caddeeyay ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo u mahad celiyay dowladda Turkiga oo ka dhabeysay balan qaadkeedii ahaa inay kabto miisaaniyadda dowladda Somalia. “Dowladda Turkiga waa wallaal dhab ah oo jira oo fahamsan daruufaha Dowladda Federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed, sidaas daraadeed waxaan si kal iyo laab ah uga mahadcelineynaa taageeradooda kabka miisaaniyada Dowladda oo ay 5 bilood na siiyeen oo bishiiba ay tahay 2 milyan oo dollar. Tani wallow aysan dhameystireynin baahida Dowladda iyo tan shacabka, haddana waa bilow wax weyn noo tareysa”ayaa lagu yiri War saxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in si shacabka ugu sheegto dowladda Federaalka xaqiiqda dhabta ah ee maaliyadda ay ku dhawaaqayaan in lacagta Turkiga ugu deeqay ay soo gaartay, si loogula xisaabtamo. “Dowladda Federaalka si ay shacabka ugu sheegto xaqiiqda dhabta ah ee maaliyada ayaan iclaamineynaa inay lacagtaas na soo gaartay si shacbka uu noola xisaabtamo annagana aan uga dhabeyno ballanqaadkii ahaa inaan u adeegeyno shacabka oo aan la wadaageyno xaaladeena maaliyadeed iyadoo ay dhab naga tahay inaan hagaajino maamulka iyo maareynta maaliyada si aan shacabka uga helno kalsooni marwalba ah. Deeqdan kabka miisaaniyada ahna waxaan khasnada dowladda ugu shubnay waa in shacabka ay si toos ah noola xisaabtamaan oo aan tusaale fiican u noqono si dalka loo gaarsiiyo horumar iyo barwaaqo”ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Kheyre.
Turkiga ayaa ahaa taageeraha ugu weyn ee Soomaaliya ka saacido, arrimo badan, waxaana uu horay u kabi jiray miisaaniyadda dowladda Federaalka, iyadoo bil walba bixin jiray 2-milyan oo dollar, inkastoo aysan dowladdii hore si waadix ah uga hadli jirin.